Ixabiso elicociweyo kunye nomhla wokukhutshwa kweHuawei Mate 20 Pro | I-Androidsis
Kutyhilwe ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa kweHuawei Mate 20 Pro eYurophu
NgoLwesibini isiphelo esiphezulu seHuawei siza kuziswa ngokusesikweni, ekhokelwa yiHuawei Mate 20 Pro.Ifowuni eza kulandela umgca weekhamera ezintathu zangasemva zesizukulwana sangaphambili somenzi waseTshayina. Yintsapho yeefowuni ethembisa ukunika okuninzi ukuba ungathetha ngayo, ukongeza ekuthengiseni kakuhle. Uphawu lwaseTshayina lububonile ubukho balo kunyuko lweemarike, kwaye baya besondela ngakumbi kuApple ngokuthengisa.
Siwazi umhla wokubonisa kwale Huawei Mate 20 Pro iinyanga. Ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa ubonakalisiwe ngomnxeba eYurophu. Iziqwenga ezibini zolwazi ezinomdla kubathengi.
Okwangoku ayaziwa ngokuchanekileyo ukuba zingaphi iinguqulelo esiza kuzifumana kwisiphelo esiphakamileyo kwintengiso. Kuya kubakho ingxelo ye-Huawei Mate 20 Pro ene-RAM ye-6 GB kunye ne-128 GB ukugcinwa kwangaphakathi. Yinguqulelo apho amaxabiso sele evuziwe kumnatha. Ke sinokufumana umbono ocacileyo malunga nayo.
Umzali umzali Ixabiso lolu hlobo lweHuawei Mate 20 Pro eYurophu iya kuba ngama-euro angama-999. Ngokusebenza i-euro ezingama-1.000 XNUMX zexabiso leflegi entsha yomenzi waseTshayina. Ke iyongeza kwi-craze yeefowuni ezinamaxabiso kweli candelo, nesibona lukhulu kulo nyaka.
Ukongeza, kuqikelelwa ukuba kwezinye iimakethi eYurophu, ixabiso lefowuni liya kuba longeze i-50 euro, ibe yi-1.049 ye-euro kwamanye amazwe. Nangona okwangoku kungaziwa ukuba leliphi ilizwe eli xabiso liza kubiza kakhulu, kwaye nesizathu sokunyuka kwamaxabiso. Malunga nomhla wokukhutshwa kwayo, izakwenzeka nge-5 kaNovemba.
Ubuncinci lo ngumhla wokufumana kwabo abo bagcine iHuawei Mate 20 Pro. Kodwa inokwenzeka ukuba iya kudibana nomhla wayo wokuphehlelelwa ngokusemthethweni eYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Kutyhilwe ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa kweHuawei Mate 20 Pro eYurophu
Ezonaapps zilungileyo ze-Android zokukhangela ulwazi
I-beta 19 yeFIFA ngoku iyafumaneka kwi-Android